အနာဂတ် LEGO အတွဲများသည်မတူကွဲပြားမှုနှင့်ပါဝင်မှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်
20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 391 Views စာ5မှတ်ချက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, Batman, City, Friends, Lego, Lego Batman, Lego CIty, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego Marvel, Lego Star Wars, LEGO.com, LGBTQIA +, Marvel, မဲ Ashton, Queer မျက်လုံး, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏ဒုတိယဥက္ကဌ Matthew Ashton ကအနာဂတ်အကြောင်းအရာများတွင်ကွဲပြားမှုများနှင့်ပါဝင်မှုများပိုမိုပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ ၂၀၂၁ ၏အကျော်ကြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှစ် ဦး Lego Matthew ကဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောပစ်လွှတ်မှုများသည်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ကွဲပြားမှုကိုအာရုံစိုက်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီကစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာအတူစကားပြောဖြစ်တယ် Lego Fan Media အပါအ ၀ င် ဂျေးရဲ့အုတ်ဘလော့ဂ်ဒီဇိုင်းဂုရုကရှင်းပြသည် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft (ပြန်လည်သုံးသပ်) ဒါတွေကအစပဲရှိပါသေးတယ်။
“ ဒါကအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာတကယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားတဲ့အရာပဲ” ဟု Matthew ကဆိုသည်။ “ မင်းစိတ်ကူးနိုင်သလောက်ငါတို့ကလူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကိုယ်စားပြုနေတယ်ဆိုတာသေချာစေချင်တယ်၊ လူတွေကိုသူတို့ကပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ခံစားရပြီးဖိတ်ခံရဖို့ p ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။art အမှတ်တံဆိပ်နှင့် part ထုတ်ကုန်တွေ၊ ငါတို့ဖန်တီးတဲ့အရာအားလုံးကငါတို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ”
မဿဲ၏အဆိုအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းအရာများကိုတစ်နေရာတည်း၌သာစူးစမ်းလေ့လာကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ Lego လာမယ့်လနဲ့နှစ်တွေမှာအုပ်စုရဲ့ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့အစုစု
“ ပိုက်လိုင်းထဲမှာတခြားအရာတွေရှိသေးတယ်” ဟုသူကရှင်းပြသည်။ “ ငါတို့ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လိုင်းတွေမှာအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ စာနာမှုနဲ့နားလည်မှုအကြောင်းသင်ခန်းစာတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ကူညီတယ်၊ လူတိုင်းကမတူဘူး၊ တကယ်ကိုကွဲပြားတာကတကယ့်ကိုတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာနဲ့မင်းအကြောင်းတွေပေါ့။
“ ထုတ်ကုန်တွေစတင်သည့်အခါနောက်ဆုံးမှာထွက်လာမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒါကိုငါတို့ပိုအလေးထားတယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်။ ငါတို့လုပ်ရမယ့်တိကျသေချာတဲ့လုပ်ရပ်တွေရှိတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကငါတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့ကအမြဲတမ်းရှေ့ကို ဦး တည်နေလိမ့်မယ်။ ”
Matthew သည်အသေးစိတ်အချက်များမပါသော်လည်းထိုအာရုံကိုပြရန်သိသာသောကိုယ်စားလှယ်များမှာ Lego အစရှိသောအဖွဲ့၏အိမ်တွင်းအကြောင်းအရာများ Friends or CITY - ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အရှိဆုံးနေရာမှာရှိတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာလိုင်စင်ရအိမ်ခြံမြေများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် Star Wars, Batman နှင့် Marvel ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ပါဝင်မှုများအပါအ ၀ င် LGBTQIA+ အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကလက်ခံခဲ့ကြပြီး၊ ထို့ကြောင့်အချို့သောဇာတ်ကောင်များသည်အနာဂတ်အုပ်စုများတွင်လိုင်စင်ရထုတ်ကုန်များထက်ပိုရှေးကျသည်ကိုမြင်နိုင်သည်။
40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ နှင့် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft နှစ်ခုလုံးမှမှာယူနိုင်ပါသည် LEGO.com အခု ကြောင်းအလုပ်ထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ္တူများကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်၎င်းလုပ်ဆောင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO Collectible Minifigure အသစ်နှင့်သီးသန့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
နောက်ဆုံး LEGO ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ Star Wars Jabba နန်းတော်သည်ဤမျှအငြင်းပွားစရာဖြစ်နေပါသလား။ →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုအနာဂတ် LEGO အဖွဲ့များသည်မတူကွဲပြားမှုနှင့်ပါဝင်မှုကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်"
ကော်ပိုရေးရှင်းအများစုသည်သူတို့၏ကွဲပြားမှုနှင့်ပါဝင်မှု၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးစသည့်ကိစ္စများကိုအာရုံစိုက်ပုံရသည့်အတွက်ဤအရာသည်ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးမှအံ့သြသွားစေခြင်းမရှိပေ။ etre ။ ကိုယ်စားပြုမှုပါ ၀ င်သည်နှင့်အမျှဤအပြောင်းအရွေ့သည် p တစ်ခုလုံးလုံးဘက်လိုက်မှုရှိသည်ဟုငါထင်သည်။articular အတွေးအခေါ်အမြင်၊ အထောက်အထားနိုင်ငံရေး။ အခြားဝေဖန်ရေးဆရာများကကောက်ချက်ချနိုင်သည့်အတိုင်းပင်၎င်းသည်သူ့ဘာသာသူအတော်လေးကျဉ်းမြောင်းပြီး insular ဖြစ်သည်။ LGTBQIA+ minifigures များ (အိမ်တွင်းအကြောင်းအရာများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်လူကြီးများသို့သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုနှစ်သက်သောလိုင်စင်ရအကြောင်းအရာများအတွက်ပိုဖြစ်နိုင်သည်) ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး၊ မွတ်ဆလင်စသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားဖွယ်သမိုင်းဝင်အချိန်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အစီအစဉ်များကိုဆိုလိုသည်။
ငါမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့စွပ်စွဲခံလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိရင်ငါဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကြောင်းများစွာကိုဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ငါစဉ်းစားလို့မရဘူး၊ ဒီကော်ပိုရေးရှင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကဆုတ်ယုတ်ပြီးမလိုအပ်ဘူး။ LEGO ၏အလှတရားသည်တည်ဆောက်သူသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလောကတွင်နှစ်မြှုပ်ခွင့်ပြုသောကစားစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူဝါဒများအားဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်မျိုးကွဲကွဲပြားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောသဘောတရားကိုသာ kowtowing လုပ်ခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ပေါ်လစီမူဝါဒဖြစ်သည့်အရာများအားလုံးလုံးလျားလျားကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များကိုဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းကိုအလိုမရှိဟုခံစားရစေသည်။ LGBTIQA+နှင့်အုတ်ပရိတ်သတ်များရှိသူများရှိသော်လည်း LEGO (အခြားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကဲ့သို့) သည်သူတို့၏ဘ ၀ ၏သေးငယ်သောရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကိုရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအခြေခံသွန်သင်ချက်များကို ၀ င်ရောက်သူများထက်စူးစူးစိုက်စိုက်မစူးစိုက်သင့်ပေ။ မရ။
ကောင်းပြီတင်! Lego ၏အနှစ်သာရမှာသင်အလိုရှိရာကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်၊ Lego ကိုယ်တိုင် (အတိအကျစစ်တပ်ဟုမသတ်မှတ်ထားသော) ဆိုသောအပြင်အဆင်များကိုပင် p ဖြင့် ၃ ထပ်တိုးနိုင်သည်။arty ပစ္စည်းများ
ဤအရာသည်သန့်ရှင်းသော lego Joy သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအယူဝါဒများကိုပိတ်ပင်သင့်ပြီး၎င်းတို့သည် lego အခြေအနေအတိုင်းအမြဲရှိနေခဲ့သည်။ ဒီကုမ္ပဏီကသူတို့ကအရမ်းပျက်စီးစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဒီဝါဒကိုထောက်ခံခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားကြီးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်အခြေခံအစုံ၊ Pro- Life၊ Pro American၊ tje pro White Male အစုံ၊
မှန်တယ်…“ မတူကွဲပြားခြင်း” အဲဒါတွေမပါဝင်ဘူး…